पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नामबाट प्रचण्ड शब्द हट्यो, खुमलटारमा तनाव ! – GALAXY
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नामबाट प्रचण्ड शब्द हट्यो, खुमलटारमा तनाव !
काठमाडौँ – नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नामबाट प्रचण्ड शब्द हटेको छ । जनयुद्ध सुरु गर्दा राखेको नाम फेरिएर प्रचण्डबाट पुष्पकमल दाहाल भएको नेताहरुले बताएका हुन् । नेताहरुको यस्तो अभिव्यक्तीपछि खुमलटारलाई तनाव भएको छ ।